Fairphone inopfuura iPhone mukugadzirisa index | Linux Vakapindwa muropa
Fairphone inopfuura iPhone mukugadzirisa index
Fairphone yakarova zvakakwana pane yekugadzirisa index, ichirova iyo iPhone nemapoinzi mana.
Nhau kuti Fairphone inopfuura iPhone mukugadzirisa index hauna kumuona chero kupi zvako. Kana kuburitswa kweModel 3 yavo mavhiki mashoma apfuura, Kune rimwe divi, kunze kwekunge iwe wapedza svondo rapfuura ukavhara muimba yemasowe, unenge wanzwa nezve "inoshamisa" nyowani iPhone 11.
Iyo iPhone 11 inogona kuve inoshamisa. Asi Kana zvasvika pakugadzirisa, zvakanakisa kuva neFairphone. Zvirinani zvinoenderana nezvinotaurwa nehunyanzvi portal mukugadzirisa nhare iFixit.
1 Fairphone inorova iyo iPhone mune chii?
1.1 Muedzo weapuro
2 Iyo Fairphone 3
Fairphone inorova iyo iPhone mune chii?
Iyo saiti yakadzidza iyo Fairphone 3 iyo yakatengeswa svondo rapfuura nemutengo we450 euros. Ongororo yavo yakagumisa kuti ese emamojuru emukati aiwanika nyore uye anogona kutsiviwa. Kune izvi iwe unongoda zvekushandisa zvekutanga izvo zvisina kushomeka mune chero imba kana zvinogona kuwanikwa nyore nyore. Muchokwadi Fairphone inosanganisira diki screwdriver mubhokisi rayo.
Kuita kuti basa redu rive nyore, foni ine zvinoonekwa zvinobatsira pakubvarura nekugadzirisa zvakare. Ukuwo, magadzirirwo ekugadzirisa uye zvimwe zvikamu zviripo pawebhusaiti naFairphone.
Hazvisi zvese zvakakwana. Kunyange zvazvo zvizhinji zvezvinhu zviri mukati meFairphone 3 modules zvichigona kutsiviwa zvakasiyana, zvimwe zvinotengeswa. Nekudaro, izvi hazvina kudzivirira iyo Fairphone 3 wakawana chisina kujairika 10/10 mamaki.
Fairphone ikambani yeDutch inoda kurwisa zvakarongwa zvechinyakare maitiro eiyo smartphone indasitiri. Nepo vakwikwidzi vavo vachimanikidza kumanikidza vatengi vavo kuti vachinje michina kazhinji, vanoedza wedzera hupenyu hwesherufu kwetemu dzayo kuburikidza neye modular gungano system.
Pachine hakuchina kuongororwa kweiyo Apple mhando; iPhone 11 uye iPhone 11 Pro. Asi, hapana yemhando dzekare dzakakwanisa kukunda zvibodzwa zve6 / 10. Ikoko kunoratidzika kuve pasina chikonzero chekufunga kuti zvinhu zvinogona kuchinja.
Kubva pakuonekwa kwayo, iyo Hardware ichiri yakasimbiswa sepakutanga. Uye kukurudzira avo vasina chikonzero chaicho chekugadzirisa yavo terminal, chitsva chemari chinopihwa chakapihwa pamwe nekunyorera mahara kumabasa ekambani.
Ehezve, kune ese ari maviri kushambadzira uye zviri pamutemo zvikonzero, hapana kambani inogona kumisa kutarisisa kune zve ecological nyaya. Apple inoona kuti mafoni ayo matsva ari 100% yemahara yezvinhu zvine chepfu uye zvese zviri mukati zvadzo zvinogadziriswazve (nazvo). Kutsvaga modhi yebhizinesi isina kuvakirwa tekinoroji vassalage ichasara kune ramangwana.
Iyo Fairphone 3
Iyo musika we smartphone izere. Izvi zviri pachena mune chokwadi chekuti hutsva huri kuramba huchiwedzera kupenga. Kubva kumafoni akapetwa kaviri kuti uwedzere huwandu hwemakamera. Uye izvo, isu tiri kutaura chete nezve Hardware. Kana tikataura nezvakezvakavanzika uye kupatsanurwa nyaya yeanonyanya kufarirwa masisitimu anoshanda, tinogona kutevera kwemaawa.
Chimwe chinhu chakareruka sekushandura bhatiri renhare, iro makore mashoma apfuura raingoda kuenda kunotenga, kuvhura nhare uye kuitsiva, nhasi zvinoreva kuti vazhinji vedu kuenda kune technical service. Ini handina mari, asi ini ndinofungidzira kuti kutenga foni nyowani kazhinji kunodhura pane chero kugadzirisa.
Nehurombo dzimwe nzira senge Librem 5 ivo havakwanise kukwikwidza mumutengo uye kutaurwa nemhando dzakakurumbira. Neraki iyo Fairphone 3 iri padyo chaizvo.
5,7 inch Yakazara HD skrini.
Qualcomm Snapdragon 632 machipisi.
4 GB ye RAM.
64GB yekuchengetedza (inowedzerwa kuburikidza ne microSD)
12 MP f / 1.8 yekumashure kamera, 1 / 2,55-inch sensor (Sony IMX363)
8 MP f / 2.0 pamberi kamera
Bhatiri: Inogona kudzoserwa 3.060 mAh, Kurumidza Kubhadharisa 3.0
Kubatana: Wifi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC
Zvimwe: Dual Nano SIM, USB-C, yekuverenga zvigunwe zvigunwe, headphone jack, FM radio, Miracast rutsigiro
Kusiyana nevamwe vanogadzirwa nemaoko, Fairphone cinoshandisa 3,5mm headphone jack, saka haufanire kurasa idzo dzauinadzo kana kushandisa mari pane imwe yaive nerubatsiro rwakakodzera.
Sezvo pasina munhu akakwana, iyo inoshanda sisitimu ndeye 9, kunyangwe kubvira iyo yekare modhi inotsigira Ubuntu Kubata, hapana chikonzero chekufunga kuti uyu anoita futi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Fairphone inopfuura iPhone mukugadzirisa index
Iyo zvirokwazvo ndiyo nzira yekuenda !! Iko kurongwa kushaya nguva kwakangotizadza nemarara uye kwakamisa kusimudzira kwesainzi!
Huawei yatanga kutengesa makomputa neLinux inoshanda sisitimu